Utshintsho olukhulu kunye neBluelock | Martech Zone
NgoMgqibelo, Disemba 22, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ndiye ndaqala ukufunda uguquko olukhulu UNicholas Carr. Nantsi ingcaphuno evela kwindawo efileyo:
Kwiminyaka elikhulu eyadlulayo, iinkampani zayeka ukuvelisa amandla azo ngeinjini zomphunga kunye needynamos zaza zaxhuma kwigridi yombane esandula ukwakhiwa. Amandla atshiphu akhutshwe zizinto zombane awakhange atshintshe nje indlela amashishini asebenza ngayo. Icwangcise indlela eyahlukileyo yotshintsho kwezoqoqosho nakwezentlalo ezenze ilizwe langoku labakho. Namhlanje, uguquko olufanayo luyaqhubeka. Zixhomekeke kwi-intanethi yegridi yekhompyuter yehlabathi, iindawo ezinkulu zokulungisa ulwazi sele ziqalile ukumpompa idatha kunye nekhowudi yesoftware kumakhaya ethu nakumashishini. Ngeli xesha, yikhompyuter ejika ibe yinto eluncedo.
Utshintsho sele lusenza umzi mveliso wekhompyuter, luzisa abantu abakhuphisana nabo abanjengoGoogle kunye ne-Salesforce.com ngaphambili kwaye besoyikisa abantu abanjengoMicrosoft noDell. Kodwa iziphumo ziya kufikelela kude ngakumbi. Ixabiso eliphantsi, elisebenzisekayo elibonelelwa ngecomputer liya kuthi ekugqibeleni litshintshe uluntu kakhulu njengoko kwenza umbane wexabiso eliphantsi. Sele siyibona imiphumo yokuqala? kutshintsho lolawulo kumajelo eendaba ukusuka kumaziko ukuya kubantu, kwiingxoxo malunga nexabiso labucala, ukuthunyelwa kwemisebenzi yabasebenzi bolwazi, nokuba kukukhula koxinaniso lobutyebi. Njengoko izixhobo zolwazi zisanda, utshintsho luya kwanda kuphela, kwaye isantya sabo siya kukhawulezisa kuphela.
Utshintsho olukhulu sele luyinyani. NgoJanuwari, Indawo yokuphumla ihambisa izixhobo zethu zemveliso kwi IBluelock. Lihlabathi elitsha (njengoko intengiso isitsho kwibar esecaleni).
Kukuncoma okugqibeleleyo kwiSoftware njengeNkonzo (Saas). Iinkampani ze-SaaS endizisebenzeleyo zihlala zikhupha izikali kwizixhobo zekhompyuter kunye namaqela abantu ukubaxhasa. IBluelock sisisombululo esisiso kuthi kuba sinako ukukhulisa ishishini lethu ngaphandle kokukhathazeka ngezixhobo zethu okanye ngezixhobo ezinkulu ezihamba nayo. Kukhuphela ngaphandle ixhala!
Izibonelelo njengeNkonzo (IaaS) yimodeli yeshishini evelayo ekuvumela ukuba uthenge izixhobo ze-IT kumboneleli we-IaaS njengeendleko ezisisiseko rhoqo ngenyanga. Nge-IaaS, endaweni yokuthenga imfumba yeeseva kunye ne-SAN, unokuqesha iiprosesa ezingamashumi amathandathu, ii-terabytes ezimbini zokugcina kunye nememori engamashumi amathandathu anesine yememori kwaye uyihlawule ngenyanga okanye ngekota. Le meko-bume yile nto ithethwa nguNicholas kwincwadi yakhe. Sithenga i-bandwidth, indawo yediski kunye namandla okuqhubekeka ngokungathi sithenga nayiphi na into eluncedo.
Uninzi lwabathengisi be-IaaS luyabaleka VMWare okanye inkqubo efanayo yokusebenza kunokuba isebenze kakuhle. Le ndlela yenkqubo yokusebenza sisitshixo sokubeka i-shim phakathi kwehardware kunye nokusingqongileyo okuvumela ukuba ikwazi ukujikeleza, ukujikeleza, ukuphindwaphindwa, njl.
Senza uguquko olukhulu ngasekupheleni kukaJanuwari. Thatha ikopi yencwadi kwaye unike iBluelock umnxeba.
I-PS: ASIYONA iposi ixhaswayo… yinto nje endifuna ukuyaba kuba ndivuya kakhulu ngokuhamba!
tags: wayethandaumlilohr 1981kim dotcomukukhuphelanapsterubuqhetsebaipirateipirate bayUbusela
Ngomhla wama-23 ku-Disemba 2007 ngo-12: 14 AM
Kodwa iBlueLock ibonakala ingumxhasi wesiza…
Ngapha koko, kutheni ungakhankanyi iBlueLock kwaye ungakhankanyi i-EC2 yeAmazon, i-S3, kunye ne-SimpleDB?
Ngomhla wama-23 ku-Disemba 2007 ngo-11: 31 AM
IBluelock ayihlawuli ngeposi okanye indawo yomxhasi. Ndinika abanye babahlobo bam kunye nabalingane ngokubekwa kwindawo encomekayo ngamanye amaxesha. Mhlawumbi kufanelekile ukuba ndiyibize ngegama elithi "Abahlobo & Abaxhasi".
IBluelock ikwalapha eIndiana- uya kubona ukuba ndizama ukunceda ngeenkampani zokuqalisa zaseIndiana kunye neenkampani zetekhnoloji.
Inkonzo yeAmazon ayisiyoSiseko njengeNkonzo, ziiNkonzo zeWebhu. Umahluko kukuba indalo esingqongileyo ayitsali 'kwilifu' (igama leAmazon) apho okusingqongileyo kwabelwana ngako namakhulu okanye amawaka abanye.
NgeBluelock siya kuba neeseva ezinikezelweyo, indawo yediski, iiprosesa kunye ne-bandwidth. Sikwindawo ebonakalayo- siyakwazi ukuphinda-phinda okusingqongileyo xa kufuneka njalo.
Siqinisekisile i-SLA's, ukuthotyelwa kwemigangatho yoKhuseleko kuShishino, ii-firewalls, ukubonwa kwe-intrusion, ukufikelela kwi-console, ukubeka esweni i-24/7 kunye nenkxaso, i-bacult backups, amandla angafunekiyo… uyabiza igama.
Ndiyathemba ukuba iyanceda! Yabona IBluelock Ngolwazi olongezelelweyo.
Ngomhla wama-23 ku-Disemba 2007 ngo-12: 05 PM
Emva koqwalaselo lwakho oluqaqambileyo, mhlawumbi iBlueLock kufuneka ibe ngumxhasi ohlawula……
@Douglas: Ukunceda iIndiana
Ndiyaqonda, ndenza okufanayo eAtlanta, GA (yabona http://web.meetup.com/32/)
@Douglas: IAmazon ayisiyo inkonzo yeziseko zophuhliso
Ngaphandle kwenqanaba elifanayo leBlueLock ngokucacileyo, kodwa ngaba i-EC2 ayisiyo sisiseko?
Ngomhla wama-23 ku-Disemba 2007 ngo-11: 20 AM
@Mike Kukho ukungqubana phakathi kokunikezelwa kweAmazon EC2 / S3 / SimpleDB kunye neBlueLock. Kodwa xa sithetha ngokubanzi, zizisombululo ezininzi ezahlukileyo, kwaye zijolise kubaphulaphuli abahlukeneyo.
Awunakho ukuseta iklasta yeAmazon ngaphandle kwesixa esifanelekileyo solwazi lobuchwephesha, kwaye kuya kufuneka uyile into yokulawula iimeko ezahlukeneyo ze-EC2. Ukwabaleka kwiqela leengxaki eziya kufuna ukuphathwa kwisicelo, njengemeko yokuba iimeko ze-EC2 azinazo ii-IPs ezimileyo, ukuba akukho kugcinwa kwendawo kwimeko ye-EC2, ukuba ukugcinwa kwe-S3 kuhamba kancinci kune-SAN okanye I-disk yendawo, kwaye i-SimpleDB ayamkeli imibuzo ye-SQL okanye ivumele ukujoyina okunzima. I-EC2 kunye ne-SimpleDB isekhona kwi-beta ngoku (kunye neyokugqibela kwi-beta yabucala), ke akukho zi-SLAs- ayisiyiyo kanye into onokufuna ukuyixhasa kwimveliso yakho ebalulekileyo.
I-BlueLock ngokusisiseko ikunika indawo yokungena endaweni ye-rack ye-Windows kunye / okanye iiseva zeLinux ngaphandle kwentloko yokubalawula, okanye ukuphinda wenze ubunjineli kwisicelo sakho ukuze sibe nokubanjelwa eAmazon. Ukwafumana ukuthetha neenjineli ezixhasa umnxeba.
Oko bekuthethile, iAmazon ibiza kakhulu ukuba uqalise ngayo, kwaye iBlueLock isenokungabi nazindleko xa usebenzisa iiseva ezimbalwa kuphela. Ikwahlawula njengokusebenzisa kwakho, ngelixa ixabiso leBlueLock lifana namaziko emveli wedatha apho useta isicwangciso sokuhlawulela isixa esithile se-cpu / idiski / ibhendi / njlnjl nokuba uyayisebenzisa inyanga nenyanga.
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Ndiyazi abantu abambalwa abasebenza eBlueLock. Kodwa ndisebenzisa iAmazon S3 kwimveliso, ndingumlandeli omkhulu we-EC2 (kwiimeko ezifanelekileyo), kwaye ndilindele ngolangazelelo isimemo sam se-beta esizimeleyo se-beta.
Ngomhla wama-23 ku-Disemba 2007 ngo-12: 08 PM
Enkosi ngezimvo uAde. Ndiza kucela uDouglas ukuba abhale iposi ngokuthelekisa kunye nokuthelekisa iBlueLock kwiinkonzo zewebhu zeAmazon kodwa akukho mfuneko ngoku njengokuba sele wenze!
I-PS Nina baseIndiya nibambelela ngokwenene, doncha? 🙂
Ngomhla wama-23 ku-Disemba 2007 ngo-12: 21 PM
Ha! Ewe siqinisekile, Mike!
Ngomnye wale mimandla mincinci ngokwaneleyo ukuba kukho iidigri ezimbalwa zokwahlula phakathi kweenkampani ezi-2 okanye abantu. Sizama nzima ukuqinisa obu budlelwane kwaye siququzelele nengingqi ngokunjalo.
Ngummandla ogqibeleleyo wokuqalisa inkampani yetekhnoloji kuba iindleko zokuphila kunye neerhafu zilungile. Xa kuthelekiswa nesizwe, ziipesenti ezingama-20 ngexabiso eliphantsi ngokomndilili. Lilo elo igama ekufuneka siliphumile! Isimo sengqondo seMidWest ekusebenzeni nzima kunye nenkonzo enkulu ngumahluko omkhulu ngokunjalo.
Incinci i-Indiana Inethiwekhi entsha yoluntu eye yaqalwa ukulungiselela ngcono amashishini kuloo mmandla.
PS: Ndonwabile uAde engenelele. Siya eBluelock ke akufuneki ndazi yonke iyantlukwano 😉
Ngomhla wama-23 ku-Disemba 2007 ngo-12: 42 PM
@Douglass: Ngummandla ogqibeleleyo ukuqala inkampani yezobuchwephesha kuba iindleko zokuphila kunye nezibonelelo zerhafu zilungile. Xa kuthelekiswa nelizwe lonke, ngaba ngama-20% ixabiso elingaphantsi komndilili. Ligama ekufuneka siliphumile elo! Isimo sengqondo seMidWest ekusebenzeni nzima kunye nenkonzo enkulu ngumahluko omkhulu ngokunjalo.
Kodwa ke kuya kufuneka uhlale Indiana thintela…. (uxolo, andinakumelana '-)
Ngapha koko, kuvakala ngathi kufanele uye kubiza iQela lezoRhwebo njengomxhasi wakho olandelayo…
Ngomhla wama-23 ku-Disemba 2007 ngo-1: 55 PM
Enkosi ngekhompyuter njengesixhobo sokusebenza. Iyavakala kakhulu kwaye kwangoko ibeka i-IaaS kwimbono. Ndiyayixabisa iposti nangonyango olukhethekileyo lweBluelock :).
Iposi entle uDoug.
Iholide ezimnandi kubo bonke.